Little Lhasa Golden Temple uye Vaishno Devi Tour | Dana @ + 91-993.702.7574 Kuti Uite.
Little Lhasa Golden Temple uye Vaishno Devi Tour
Kuronga kutora a pilgrimage tour asi akavhiringidzika pamusoro penzvimbo yacho uye nzira inoshungurudza yekugadzirira rwendo? Iko Little Lhasa Golden Temple uye Vaishno Devi Tour inogona kunge iri nzira yakakodzera kwauri. Nzvimbo dzakapoteredza, vanhu, tsika dzavo netsika dzichakusiya zvakanyanya kushamisa. Kupfuura nemipata iyi, iwe unonzwa sokunge iwe wapinda munyika itsva. Iko Little Lhasa Golden Temple uye Vaishno Devi Tour ichakutora iwe kunzvimbo dzakatsaurwa dzine nzvimbo dzakanaka. Iyo inozivikanwa se "Little Lhasa" nekuda kwevanhu vakawanda veTibetan muDharamshala, inyika yezorunyararo. Dzimba dzeHutsvene Hwake Dalai Lama iri pano. Ichokwadi, imwe nharaunda yakachengetwa muNook yakanyanya kure nekona yenyika ino yekuwanda kwepanyama inobata nzvimbo yakawanda yekufara uye kufara. Rwendo urwu runopera muDarbar yeMa Vaishno Devi. Kunyange zvazvo rwendo rwakaoma, rwune nzvimbo dzakanaka uye dzakanaka uye ine mamiriro okunze akanaka. Iko Little Lhasa Golden Temple uye Vaishno Devi Tour ichakupa mukana wekufamba munzvimbo nhatu dzinokosha uye kufadza zviyeuchidzo zveupenyu hwose.
06 Nights Programme | Mutambo Wokushanyira: 253
ZUVA 01: AMRITSAR / PATHANKOT - AMRITSAR
Paunosvika paAmritsar / Pathankot uye uende kuAmritsar. Enda kunzvimbo yeGold Temple, Jallian Wala Bagh, Wagah Border. Usiku huno paHotel.
ZUVA 02: AMRITSAR - DALHOUSIE
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwemachingwa uende kubva kuhotera uende kuDalhousie. Usiku huno paHotel.
ZUVA 03: DALHOUSIE
Dalhousie ave akatumidzwa zita reBritish Gavhuna - Mukuru wezana remakore re19th, Ishe Dalhousie. Yakapoteredzwa nemiti yakasiyana-siyana - mapaini, dodders, oak uye maruva rhododendron. Nzvimbo yekuona nzvimbo yeDalhousie inosanganisira kushanyira Panjipula, Subhash Baoli uye kuenda kuKajjiar 24 km kubva kuDalhousie yakakombwa neDoodar masango. Gwara kubva kuDalhousie kuenda kuKhajjiar inoshamisa. Usiku huno paHotel.
ZUVA 04: DALHOUSIE - DHARMSHALA
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwemachingwa uende kubva kuhotera uende kuDharmshala. Usiku huno paHotel.
ZUVA 05: DHARMSHALA - KATRA
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwemachingwa uende kubva kuhotera uende ku Katra Usiku huno paHotel.
ZUVA 06: KATRA
Mangwanani ekutanga tanga rwendo rwako kubva kuhotera kusvika Mata Vaishno Devi kuna Darshan. Usiku Hwekudzokera kuHotel.
ZUVA 07: KATRA - JAMMU / AMRITSAR DROP
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya uende kubva kuhotera uende kuJammu / Amritsar.